MateBook D15, ebugharị na imewe maka iji ya kwa ụbọchị [Nkọwapụta] | Akụkọ akụrụngwa
MateBook D15, ebugharị na imewe maka ndụ kwa ụbọchị [AKWALKWỌ]
Huaweilọ ọrụ ndị ahịa nke Huawei nọgidere na-arụ ọrụ iji nye ngwaahịa nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị na ụdị niile. Oge a anyị na ndị ikpeazụ nke akwụkwọ ọhụụ na ngalaba kọmpụta nke ụlọ ọrụ Asia amalitela na onye anyị gosipụtara ihe omume ya na-ebi ndụ izu ole na ole gara aga. N'ime ya anyị hụrụ ngwaahịa ọhụrụ abụọ, Huawei MateBook D14 na Huawei MateBook D15. N'oge a, anyị na-enyocha ọhụụ ọhụụ Huawei MateBook D15 na anyị ga-agwa gị njirimara niile nke ngwaahịa a na ihe ahụmịhe anyị ji ya, Ọ bụrụ n ’ị na - eche igbanwe laptọọpụ gị, echefula nyocha a.
Ihe mbụ bụ ichetara gị na ọ bụrụ na ịzụta Huawei MateBook D15 na EGO ị ga-enweta dị ka onyinye a iga azu paaki, a wireless òké na ụfọdụ mma Huawei FreeBuds 3 dị ka ndị anyị nyochara na mbụ, onye na-enyekwu ihe?
1 Design: mfe ma «adịchaghị» ihe
2 Nka na ụzụ: Huawei na-anabata AMD
3 Multimedia: Ihuenyo na ụda
4 Ike na ọdịnaya ederede
5 Mkpịsị aka na-agụ na obodo kwụụrụ
Design: mfe ma «adịchaghị» ihe
N'oge a, ozugbo Huawei malitere, ọ kwusiri ike otu nkọwa dị mkpa, anyị na-eche ihu laptọọpụ dị ọnụ ala na chassis aluminium dị iche iche n'ahịa. Anyị nwere ngwakọ ndị ọzọ dị na plastik na aluminom, mana Huawei MateBook D15 a wuru kpamkpam na aluminom, nke na-eme ezigbo echiche. Anyị nwere ubé uko imewe, a pụtara ezi na-ewu na larịị nke plastic kwuchara (keyboard, ihuenyo etiti ... wdg) na okokụre na-enye anyị a mmetụta nke siri ike na mma. Aluminom mgbe niile dị ka ihe kacha mma maka kọmputa.
Anyị nwere kọmpat keyboard pụtara ìhè, trackpad ama ama, yana etu o kwesiri. A naghị ahụ ya anya n'ihi ịdị nfe ya ma ọ bụ obere mkpa ya, mana ọ dị na njedebe nke iji ntụsara ahụ na ntụkwasị obi. Banyere aka ekpe, anyị nwere ọdụ ụgbọ USB-C, ọdụ USB na HDMI. Akụkụ aka nri bụ maka ọdụ ụgbọ USB abụọ ọzọ na Jack 3,5mm. Anyị na-eche ihu keyboard nke nwere ezigbo njem na igodo sara mbara, yana ihuenyo na mmetụta matte na-ekpuchi 87% nke elu. Ngosiputa anyi nile banyere ihe na nhazi nke MateBook D15 a di nma.
Nka na ụzụ: Huawei na-anabata AMD
N'oge a Huawei ekpebiela ịkwado nhazi nke AMD mbinye aka, na-ahọrọ maka ọnụọgụ dị ala ya na ebumnuche nke inweta ezigbo arụmọrụ site na ịgbanye batrị na nke kachasị. N'aka nke ọzọ, anyị achọpụtala oke okpomọkụ, nke m ga-ekwu, anaghị emetụta arụmọrụ nke laptọọpụ ma ọlị, yabụ jụrụ oyi dị mma.
Nlereanya Nwunye D15
Nhazi AMD Ryzen 5 3500U
Ihuenyo 15.6 inch IPS - Mkpebi FullHD - 249 nits Ihie - 60Hz
GPU AMD Radeon Vega 8 Graphics (agbakwunyere)
Ebe nchekwa RAM 8 GB DDR4
Nchekwa 256 GB NVMe SSD diski
WebCam Mkpebi HD
Mkpisiaka agụ Ee
Batrị 42 Wh na chaja 65W USBC
Njikọta na ndị ọzọ WiFi ac - Bluetooth 5.0 - NFC - Huawei Share
Ọdụ ụgbọ mmiri 2x USB 3.0 - 1x USB - 1x USBC - 1x 3.5mm Jack - 1x HDMI
Ibu ibu 1.53 n'arọ
Ọkpụrụkpụ 16.9 mm
Ahịa 699 €
Linkzụta njikọ BUY Huawei MateBook D15
Ngwaahịa a mara mma na ngalaba ọrụ aka, Anyị anaghị echefu ihe ọ bụla gbasara njikọta, ọkachasị ugbu a ndị nrụpụta na-ahọrọ USBC, na m onwe m nwere ekele maka ọdụ ụgbọ mmiri HDMI, nke dị m mkpa.
Multimedia: Ihuenyo na ụda
Anyị na-amalite site na otu panel IPS nke nyere m ezigbo n'akuku nke ọhụụ, anyị nwere 15,6 ″ ezi kọmpat ekele ya 87% itinye n'ọrụ. Anyị nwere ọkọlọtọ mana njupụta zuru oke, ma n'okpuru ma n'elu. Fọdụ nchapu ọkụ na mpaghara ndị dị ala, ọ dịghị ihe na-enye nsogbu na nke ahụ abụghị ihe a na-ahụkarị na ogwe IPS nke laptọọpụ ndị dị otú ahụ. Ihuenyo ahụ dị m ka ọ bụ otu n'ime akụkụ kachasị mma nke ngwaahịa nwere ezigbo ọdịiche na mkpebi zuru oke (FullHD) iji nye anyị ezigbo ahụmịhe ma na-eri multimedia na-arụ ọrụ ekele ya "matte" imecha.
Da ahụ dị ike ma doo anya, ezigbo bass n'achọghị ileghara mids anya na ike ụda stereo dị elu. O zuru ezu iri ọdịnaya ma ọ bụ kpọọ ụfọdụ soro egwu, ọ bụ ngalaba nke ọtụtụ ụdị na-eleghara anya na ebe Huawei rụchara ezigbo ọrụ. Obi abụọ adịghị ya, ahụmịhe na ọkwa mgbasa ozi na Huawei MateBook D15 a dị m ezigbo mma, ngalaba nke na-ahapụkarị ihe achọrọ na laptọọpụ nke otu ọnụahịa dị na ụdị ndị ọzọ. Pụrụ iche aha ya "popup" igwefoto zoro na igodo, ezigbo iji gosipụta agba abụọ na Skype.
Ike na ọdịnaya ederede
Nke a Huawei MateBook D15 nwere ngwaike AMD nke maka ndị na-enweghị inye ụwa a nwere ike iyi ka amaghị ama mana nke ahụ bụ ihe mgbaze. Na ọnụọgụ okwu a gosipụtara ya, mana omume bụ ihe dị mkpa. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma na ọkwa igodo yana yana Office 365, maka nke iji SSD enyere aka nke ukwuu. Anyị ahụbeghị nsogbu ọ bụla mgbe ị na-arụ ọrụ nhazi foto Adobe. ebe ọ na-agagharị n’enweghị nsogbu. Na ngalaba egwuregwu vidio anyị nwetara nsonaazụ anụ nke 30 Fps na-egwu na ogo dị elu na Fortnite, na a elu oriri ma ziri ezi arụmọrụ ebre Cities Skylines na ntọala niile na elu, ebe fps tụlee ubé ma adịghị kpuchie ahụmahụ (ọ bụ ka a pụtara static egwuregwu).
Maka akụkụ ya, Huawei gụnyere ụfọdụ ọdịnaya anyị masịrị. Nke mbu bu Huawei òkè, nke na-enye anyị ohere iji mmekọrịta anyị na Huawei smartphone na-emekọrịta naanị site na iweta ya nso akara mmado oku, anyị nwere ike ijikwa ama ahụ (ị nwere ike ịlele ya na vidiyo na nkụnye eji isi mee). Nke abụọ abụrụ PC Manager, a ọkachamara na-eme ka ọkwọ ụgbọala ruo ụbọchị na-achọpụtazi ya mgbe niile MateBook, ụdị ndị ọzọ kwesịrị isonye n'ụdị ndị a.
Mkpịsị aka na-agụ na obodo kwụụrụ
Ọ ga-amasị m ịkọwa ụzọ Huawei si jikọta ihe mkpịsị aka na MateBook D15 a, ha na-emesi anyị obi ike na site na mgbe anyị pịa ya (ọ na-eme dị ka bọtịnụ ike) ruo mgbe PC arụ ọrụ zuru oke ọ na-ewe ihe dịka 9 sekọnd na Ọzọkwa adịghị Anyị ga-abanye ụdị okwuntughe ọ bụla, nke ahụ bụ otu o si dị (ị nwere ike ịhụ ya na ọrụ na vidiyo). Gaghị egbusi oge ịkọwa onwe gị ebe ọ bụ na otu ịgbanye ya emeela ya, Ọzọkwa, kọmputa ole na ole na ọnụahịa ego a gụnyere usoro ndị a.
Autonomy bụ nsogbu mbụ na MateBook D15 a, anyị na-ahụ batrị nke nwere ike ibu obere karịa, ọ bụ ezie na ọ na-ebu ọnụ ngwa ngwa ma ọ bụ ihe dị ịrịba ama Ọ nwere eriri USB USBC abụọ na nkwụnye 65W nke nwere kọmpat (Ọ na-echetara anyị Huawei Mate 30 Pro), enwebeghị m inweta karịa awa anọ nke nnwere onwe iji ngwakọta agwakọta na-agụnye iwere ọdịnaya nke ọdịnaya, na-edezi foto, na Office 365 na ụfọdụ egwuregwu vidio.
Ahụmịhe m na Huawei MateBook D15 O nweela afọ ojuju, na-enye arụmọrụ laptọọpụ a tụrụ anya na ọnụego ọnụahịa a, gụnyere n'aka nke ụfọdụ atụmatụ ndị na-amata ọdịiche dị ka onye na-agụ akara mkpịsị aka, ihuenyo dị mma na ihe adịchaghị mma, mee ya ka ọ dịrị nke ọma n'ime laptọọpụ sitere na otu ụdị ngwaahịa, ịghọ otu n'ime ihe ndị ọzọ bara uru maka ego. Nwere ike nweta ya site na 699 na ebe dị iche iche a na-ere ere dị iche iche.
Ezigbo ihe eji eme ihe, etinyere nke ọma na ịhazi mma
Ọ bụ ọdụ dị ike ma zuru oke kwa ụbọchị
Ọ nwere ezigbo ngalaba mgbasa ozi
Atụmatụ ndị ọzọ dị ka Huawei Share, akara mkpịsị aka ma ọ bụ PC Manager tinye uru
Autonomy bụ adịghị ike ya
Ọ bụ ezie na arụmọrụ anaghị adaba, laptọọpụ na-adịkarị ọkụ
Agaara m agbakwunye otu ọdụ USB-C ma wepụ USB 2.0
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » MateBook D15, ebugharị na imewe maka ndụ kwa ụbọchị [AKWALKWỌ]